Ịchọ Nandrolone - Steroid Raws
/Ihe nchọta maka "Nandrolone"
post 05 / 30 / 2019 Dr. Patrick Young
Pọtụfoliyo 05 / 27 / 2019 Dr. Patrick Young
ngwaahịa 05 / 25 / 2018 Dr. Patrick Young
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke 9 (10) -Dehydronandrolone (6218-29-7), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na njikwa njikwa njiri mara mma.
post 04 / 05 / 2018 Dr. Patrick Young
Kedu ihe bụ Nandrolone Decanoate ntụ ntụ (Deca)? Nandrolone Decanoate bụ onye na-ahụkarị steroidal hormone Nandrolone ma tinye ya na nnukwu Decreate ester. Ngwongwo Nandrolone nke mbụ pụtara na 1960 ma mepụtara maka azụmahịa na 1962 site na Organon n'okpuru aha ahia Deca Durabolin. Kemgbe ahụ ọtụtụ Nandrolone [...]
ngwaahịa 03 / 15 / 2018 Dr. Patrick Young
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke 6-Dehydronandrolone acetate Powder (2590-41-2), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na njikwa njikwa njiri ike.